Alex Trochut sy ny sangan'asany mahafinaritra: Raw Type | Famoronana an-tserasera
Alex Trochut Teraka tamin'ny 1981 tany Barcelona. Nianatra momba ny Design Design Graphic tao Elisava izy, ary nanomboka niasa ho toy ny freelance sy mpanao sary tamin'ny 2007. Ny sary nataon'i Alex Trochut, ny endriny ary ny endritsoratra, dia mandray ny fomba fijery maoderina momba ny minimalism fa ambonin'izany rehetra izany dia ny eklektika ary ny vokatry ny fifangaroana karazana sy loko isan-karazany. Raha ny filazan'ny mpanoratra, ny filozofia momba ny sangan'asany dia "betsaka kokoa" ka amin'ny fomba fiezahany hitondra minimalism amin'ny taniny, indraindray mifanipaka amin'izany ary eo ambanin'ny tanjona lehibe amin'ny fombany dia ny fialamboly amin'ireo trano kanto, ny antsipiriany feno ary ny fandefasana hevitra toa ny fanaranam-po sy fikarakarana eo ambany fifehezana. Mipetraka eo anelanelan'ny Barcelona sy Brooklyn izy izao ary androany dia tiako ny mizara aminareo ny ohatra iray amin'ny asany. Izy io dia typeface antsoina hoe Karazana manta. Araka ny hitanao dia famoronana litera renivohitra tena namorona izy niaraka tamin'ny famolavolana ny pejy Note Graphy.
Ny valiny dia manaitra aingam-panahy sy liana tokoa satria ny fombafomba mifangaro amin'ny famintinana zavakanto sy ny eo noho eo. Tena tsara satria ity ohatra ity dia mampifandanja ny fifandanjana eo amin'ny famakiana sy ny fiasa miaraka amin'ny fahazoan-dàlana kanto sy ny singa kanto. Ireto misy santionany sary ary mazava ho azy mampatsiahy anao aho fa raha te hiditra amin'ny asan'ny mpanakanto ianao dia tsy maintsy miditra amin'ny tranokalany fotsiny. ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Alex Trochut sy ny asany mahafinaritra: Raw Type
Kitapo ny kalandrie tamin'ny taona 2016